Cele News Archives - Page 52 of 195 - Cele Gabar
Home/Cele News (page 52)
အစ်မကြီးဆိုတာ အငယ်တွေအတွက်ဒုတိယမိခင်ဖြစ်လို့ အကြီးပီသအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ဘေဘီမောင်ကတော့ မိသားစုကို အရမ်းချစ်တတ် ၊ ကာကွယ်ပေးတတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်သလို အစ်မကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဘေဘီကတော့ မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေ အပေါ်မှာလည်း မိခင်တစ်ယောက်လို နွေးထွေးကြင်နာတတ်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်းအသိပါ ။ မကြာသေးမီက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူ သံစဉ်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာလည်း အစ်မအကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ညီမလေးဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီး ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက ပိုပြီးလေးစားချစ်ခင်ခဲ့ကြတာပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ ဘေဘီက အစ်မကြီးဆိုတာ အငယ်တွေအတွက် ဒုတိယမိခင်တွေ ဖြစ်သလို အငယ်တွေအတွက်အနစ်ခံတတ်သလို မိသားစုအတွက်အမိုးကာကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတဲ့အပြင် အစ်မကြီးပီသရင်အငယ်တွေအတွက်စံပြ ၊ မိသားစုတွက်ဂုဏ်ဆောင် ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ် ။ အကြီးတွေဆိုတာ လိုအပ်လာရင်မိဘကိုယ်စားအငယ်တွေပညာရေး စားဝတ်နေရေးအတွက်ပါမိဘကိုယ်စားငွေရှာဖို့အနစ်နာခံတတ်သူတွေပါ အမကြီးဆိုတာအငယ်တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမိဘတွေထက်နားလည်းပြီးနွေးထွေးနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးတွေပါ လို့ …
ကြည့်နေရင်း ပြုံးမိသွားစေမယ့် Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ရဲ့ အခွီဗွီဒီယိုလေး
Ah Boy နဲ့မြတ်ရတနာကျော်တို့ကတော့ သမီးလေး Scarlet နဲ့အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးက အနုပညာအလုပ်တွေ အရမ်းမလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပေမယ့်လည်း Our Travel Diaries Page လေးကနေတဆင့် သူတို့မိသားစုရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေ ၊ ဗဟုသုတရစရာ၊ ပျော်စရာ ဗွီဒီယိုလေးတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်တီးမျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုဗစ်ကာလအိမ်မှာပျင်းနေကြမယ့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး ခဏတာစိတ်ညစ်ညူးမှုတွေပြေပျောက်သွားအောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့အခွီဗွီဒီယိုလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။ မြတ်ရတနာကျော်က Ah Boy ရဲ့ Stylist အနေနဲ့ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး အဝတ်အစားတွေကို နှစ်ခုစီထုတ်ကာ Ah Boy ကို မျက်စိမှိတ်ရွေးချယ်စေကာ ဝတ်ဆင်ခိုင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… လိုက်ဖက်မှုမရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေ နဲ့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ …
ကိုယ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးဝယ်ပြီး အလှူမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူကို တွေ့ချင်မိတယ်ဆိုတဲ့ မိုးယုစံ
လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီလက်ရာတွေကို စုစည်းကာ ကိုဗစ်ကာလလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ လေလံပွဲလေးလုပ်ပြီး ရောင်းချနေတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိမှာပါနော်။ ဒီပန်းချီကားလေလံပွဲအလှူလေးမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးပန်းချီကားတွေနဲ့ အနုပညာရှင်များစွာပါဝင်ခဲ့သလို မိုးယုစံလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကသူကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့ပန်းချီကားလေးကို လှူဒါန်းကာ ဒီအလှူလေးမှာပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးယုစံရဲ့ (Metaphor Of Life ) ပန်းချီကားလေးကိုတော့ ကြမ်းခင်းဈေး သုံးသိန်းကျပ်နဲ့စတင်လေလံဖွင့်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့မနက် (၁၁) နာရီလေလံပိတ်သိမ်းချိန်မှာတော့ ဧရာဝတီတိုင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူမိုးယုစံရဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးက (၄)သိန်း(၅) သောင်းကျပ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိုးယုစံကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် လေလံအောင်သွားသူကို သူကိုယ်တိုင်ပေးချင်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်နဲ့မို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် Video Call ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့သလို သူ့ရဲ့ပန်းချီကားလေးကို ဝယ်ကာ ကိုဗစ်အလှူမှာတစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် အမည်အဖော်ဘဲ အလှူမှာပါဝင်ခဲ့သူမို့ …
နို့မှုန့်ဖိုးမတတ်နိုင်တာကြောင့် ထမင်းရည်သောက်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ခိုငနြှငြးဝကတေော့ ပရဟိတအလုပတြှကေို မမောနိုငမြပနြးနိုငကြှိုးစားလုပကြိုငနြသေူတဈယောကပြါ။ အနုပညာရှငတြဈယောကဖြှဈသလို ခိုငနြှငြးေ၀ ရငသြှေးလေးမွားဂဟော ကို တညထြောငထြားပှီး မိဘမဲ့ကလေးမွားစှာအတှကရြပတြညကြာ ကလေးတှကေိုကွှေးမှေးစောင့ရြှောကနြတောပါ။ ခိုငနြှငြးဝကတေော့ ဂဟောက ကလေးငယတြှအတှေကသြာမက အခှားလိုအပတြဲ့နရောတှမှောလညလြှူဒါနြးသှားဖို့မကှာခဏကှိုးစားနသေူပါ။ အခုလညြး သူရဲ့ဖှေ့တခြအြကောင့မြှာ ” တောငဒြဂုံ ရပကြှကြ အတှငြးရှိ နို့မှုန့ြ ဘိုး မတတနြိုငြ၍ ကလေးငယမြွားအား ထမငြးရညြ အစားထိုးတိုကနြရသေောကှောင့ြ ကမွနှင့အြတူ “Nature One” မိသားစုမှ နှို့မှုန့ြ ဗူး (၁၀၀) ကုသိုလပြှု လှူဒါနြးပေးဖှဈပါတယရြှငြ..ယခုလို အခကအြခဲဖှဈ ဒုကျခရောကနြသေူမွားအား ကမွနှင့ြ အတူ ဝိုငြးဝနြးဖှရှငြေး လှူဒါနြးပေးကှသော အလှူရှငမြွားအားလုံး တဈဦးတဈယောကခြငွြးအား ကွေးဇူး အထူးတငရြှိပါတယရြှငြ” ဆိုပှီးတော့ ရေးသားဖောပြှထားတာပါ။ ခိုငနြှငြးဝကတေော့ ကိုဗဈကာလအတှငြးမှာလညြး ကူညီလှူဒါနြးမှုအလုပတြှကေို …
ဖောင်ကြီးလုပ်အားပေးတာဝန်ပြီးဆုံးပြီမို့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေအတွက် ပရိသတ်ကြီးကို ဆုတောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အလှမယ် L ဘောက်နူး
Miss Supranational Myanmar 2015 ရဲ့ First Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ L ဘောက်နူးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လက စံပြအလှမယ်တစ်ယောက်ပီပီ ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးစင်တာတွေမှာ လုပ်အားပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖောင်ကြီးကာကွယ်ကုသရေးစင်တာမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ L ဘောက်နူးကတော့ ကျရာနေရာမှာ လုပ်အားပေးကူဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူဖြစ်ပေမယ့် သူနာပြုအတတ်ပညာလည်း သင်ကြားထားဖူးသူမို့ အကူသူနာပြုအနေနဲ့ ဖောင်ကြီးမှာ လုပ်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်အားပေးနေစဉ်တလျှောက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာနဲ့ တာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့စက်တင်ဘာ(၄) ရက်နေ့မှာ တစ်လပြည့်ဖို့တစ်ရက်လိုသေးပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းခွဲပြန်ရမှာအဆင်မပြေတာကြောင့် ဒီနေ့(၄) ရက်နေ့ပြန်မယ့်အဖွဲ့နဲ့ လိုက်ပြန်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဖောင်ကြီးကုသရေးစင်တာက လုပ်အားပေးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း နောက်နေ့တွေမှာ သေချာမျှဝေပေးသွားဦးပါမယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဒါ့အပြင် မပြန်ခင် Swab Test …
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ သားဖြစ်သူချန်လှပ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဝိုင်းချစ်
လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းမှာ မှာဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ ဟာသလူရွှင်တော်ဝိုင်းချစ်ရဲ့သားဖြစ်သူ မောင်လင်းဖြိုးတစ်ယောက် ဇီဝဗေဒဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါနော်။ ဝိုင်းချစ်တို့မိသားစုအတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးတစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သလို သားဖြစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဝိုင်းချစ်တစ်ယောက် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အရမ်းကို ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလာပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့သားသမီးတွေအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြင့်ပွဲလုပ်ပေးလေ့ရှိတာကြောင့် ဝိုင်းချစ်ကိုယ်တိုင်လည်း သားဖြစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူရမယ့်နေ့လေးလို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် စိတ်မကောင်းစွာပဲ ချန်လှပ်ထားခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ တင်ပါရစေ…. ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ အနုပညာရှင် သားသမီးများထဲမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီး ဂုဏ်ထူးထွက်သူများကို ဆုချီးမြှင့်ပွဲပြုလုပ်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော် ဝိုင်းချစ်(ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ)ရဲ့ သား မောင်လင်းပြည့်ဖြိုး ဟာ …
မွေးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆွမ်းထမင်းနဲ့ ကုသိုလ်ယူလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်
November 3, 2020	Cele News
အမိုက်စားမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးကြတာကတော့ ခင်သဇင်ပါ။ စိုင်းစိုင်းရဲ့ “Oh Oh ဟော့တယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းမှာ စတင်သတိထားမိခဲ့ကြပြီး အခုဆိုရင်ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်သဇင်ကတော့ ပရဟိတလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်ခင်သဇင်ရဲ့မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်သဇင်ကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကိုမျှဝေခဲ့တာပါ။ ခင်သဇင်ကိုယ်တိုင်ဆွမ်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတာ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ အလှူလေးကိုသာဓုခေါ်ခဲ့ကြတာပါ။ ခင်သဇင်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေသလို ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်း နိုင်သလောက်လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမွေးနေ့လေးမှာတော့ သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. Source : KhinThazin
ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ အသက်ရှုစက်တွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ
မမြတ်လေးလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ အေးမြတ်သူကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ ရှာရသမျှအနုပညာကြေးလေးတွေကို စုထားပြီး ကိုဗစ်အလှူဒါနတွေအတွက် ပြန်လည်အသုံးချနေသူပါ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေတဲ့ We Love Yangon အဖွဲ့ကြီးအတွက် သူစုထားတဲ့အနုပညာကြေးထဲကနေ စက်တင်ဘာလက ဆယ်သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့သလို အောက်တိုဘာလမှာလည်း ဆယ်သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နိုဝင်ဘာလအတွက် အလှူလေးအနေနဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် အရမ်းလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့ အသက်ရှုစက် စုစုပေါင်း(၈) လုံးတန်ဖိုးငွေ သိန်း(၅၀) ကျော်ဖိုးကို လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… အေးမြတ်သူကတော့ ဒီအလှူလေးကိုလှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့တာက (၇) ရက်သားသမီးများရဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ မမြတ်လေးရဲ့လုပ်အားပေါင်းစပ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တာမို့ နတ်လူသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ရည်သန်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါခံစားနေရသူတွေ အသက်ရှုကြပ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့်အထောက်အပံ့အလှူလေးဖြစ်တာကြောင့် (၇) ရက်သားသမီးအပေါင်းလည်း အကြပ်အတည်းမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာစေကြစေဖို့လည်း …
ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရှေ့ရောက်ရှိလာဦးမယ့် ဝေလာရီ
မင်းသမီးချောလေးဝေလာရီကိုတော့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ” နှင်းဆီ” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မော် အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေသတိထားမိခဲ့ကြတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေသလို သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့သာမက သီချင်းတွေလည်း သီဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဝေလာရီကိုတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာပရိသတ်တွေထပ်မံတွေ့ရဦးမှာပါ။ မကြာခင်မှာတော့ “မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ” ဆိုတဲ့ မိသားစုဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခု ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ” ဆောင်း” အဖြစ်နဲ့ ဝေလာရီကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ထားတာကို ပရိသတ်တွေမြင်ခွင့်ရတော့မှာပါ။ ဝေလာရီကတော့ ပရိသတ်တွေကို “ရင်ခုန်ရင်း မျှော်နေပါပြီ … အရမ်းကောင်းတဲ့ Family Drama ကားလေး … “မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ “ Mrtv-4 မှာ လာတော့မယ်နော် … ဘယ်လိုတွေ အားပြိုင်ကြမလဲဆိုတာ … …
ဗဟိုအမျီုးသမီးဆေးရုံမှ မီးဖွားခါနီးအမျိုးသမီးတွေဆီကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
ယွန်းယွန်းကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ အခုအချိန်မှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေသလို ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်အဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲပါ။ ယွန်းယွန်းကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းလေ့ရှိသူပါ။ အခုလည်း ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ဒီတစ်ခေါက်တော့ မမဗိုက်တွေဆီရောက်ဖြစ်တယ်..ခုချိန်မှာ ကလေးလေးမွေးဖို့ဆေးရုံတက်ရတာတောင် အထီးကျန်ပါတယ် လူနာစောင့်တွေအများကြီးနေခွင့်မရပါဘူး မွေးခါနီးမှပေးလာတယ်ပြောတယ်!! လှူစရာနေရာတွေစဉ်းစားတဲ့အခါ “ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ” လေးလဲသွားလို့ရပါတယ်လို့” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။ ယွန်းယွန်းကတော့ ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းခဲ့သလို အခြားသူတွေကိုလည်း လှူကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ ယွန်းယွန်းကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်သောင်းစီနဲ့ အမျိုးသမီး(၂၅)ဦးကို လှူဒါန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မွေးနေ့မှာ ထပ်မံလာရောက်မယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။ ဆထက်တံပိုးအလှူပြုနိုင်ပါစေ ယွန်းယွန်းရေ… Source : YoonYoon